သွေးလှူပြီးနောက် ဘယ်လိုအားဆေးမျိုးသောက်သုံးမလဲ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အလှူအတန်းထဲမှာ ဇီဝိတဒါနအလှူဟာအမွန်မြတ်ဆုံးပါ။မိမိရဲ့သွေးနဲ့သူတစ်ပါးအသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာ တကယ့်ကိုကုသိုလ်တရားကြီးမားတဲ့အလှူဒါနဖြစ်ပါတယ်။သွေးကိုလှူဒါန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပြန်လည်အားအင်ဖြည့်အနားယူဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့် မွန်မြတ်သောအလှူကိုပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ မိမိကိုယ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်အင်အားပြည့်ဝလာအောင် ဘယ်လိုဆေးဝါး၊အစားအစာတွေကိုမှီဝဲသင့်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
သွေးလှူပြီးနောက် ဘယ်လိုအစားအစာ၊အားဆေးမျိုး သောက်သုံးမလဲ???
၁။ရေ/အရည်များများသောက်သုံးပေးပါ။သွေးလှူဒါန်းပြီးတဲ့အခါမှာ သွေးပေါင်ကျသွားလေ့ရှိပါတယ်။ဒီအခါမှာ ရေ၊ဖျော်ရည်၊ဓါတ်ဆားရည် စတဲ့အရည်အမျိုးမျိုးကို များများသောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ဒါမှ ရေဓါတ်ပြည့်ဝနေပြီး သွေးပေါင်လဲပြန်လည်မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။သံဓါတ်ပြည့်ဝသော အစားအစာများစားသုံးပေးပါ။သံဓါတ်ဟာ သွေးနီဥထုတ်ရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သံဓါတ်ပေါကြွယ်ဝသော အသား၊ငါး၊ပဲအမျိုးမျိုးနှင့်အစိမ်းရင့်ရောင်အသီးအရွက်များကိုမှီဝဲသင့်ပါတယ်။
၃။Folic acid(or)vitamin B9။၎င်းကို ခန္ဓာကိုယ်မှသွေးနီဥများထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် folic acid ပေါများကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အသည်း၊အစိမ်းရောင်ရှိသောအရွက်များနဲ့ ကညွတ် စတာတွေကိုစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ဗီတာမင် ဘီ(၂)၊ဘီ(၆)နဲ့ဘီ(၁၂)ပြည့်ဝသော အစားအစာများကိုစားသုံးပေးပါ။အဆိုပါဗီတာမင်များဟာလဲ သွေးနီဥထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တာကြောင့် ၎င်းတို့ပေါကြွယ်ဝစွာပါဝင်သော အသားနှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ပဲပိစပ်၊အာလူး၊ငှက်ပျောသီး စသည်တို့ကိုစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
၅။သံဓါတ်ဖြည့်အားဆေးများသောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။သံဓါတ်နှင့်အထက်ပါဗီတာမင်အုပ်စုများအား စနစ်တကျတွက်ချက်၍ခန္ဓာကိုယ်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းပြည့်ဝစွာပါဝင်စေရန်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အားဆေးများကိုလဲသောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
၆။သံဓါတ်ဖြည့်အားဆေးများနှင့်သံဓါတ်ပေါကြွယ်ဝသောအစားအစာများကို ဗီတာမင်စီနှင့်တွဲဖက်စားသုံးပေးပါ။ဗီတာမင်စီဟာ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းမှသံဓါတ်စုပ်ယူမှုကိုအားပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် ဗီတာမင်စီပေါများစွာပါဝင်သော ရှောက်သီး၊လိမ္မော်သီး၊စပျစ်သီး၊သဘောၤသီး၊ဟင်းနုနွယ်နဲ့ အစိမ်းရောင်ရှိသောအသီးအရွက်တွေကို သံဓါတ်အားဆေး၊အစားအစာများနှင့်တွဲဖက်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါအချက်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်အလှူထပ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ခွန်အားအမြန်ပြန်လည်ပြည့်ဝစေရန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ရပါတယ်။